HomeEnglandRio Ferdinand Oo U Hamuun Qaba Inuu La Sii Joogo Manchester United
Difaaca Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sii joogista Old Trafford isla markaana cadeeyey jacaylka uu u qabo in heshiiskiisa loo kordhiyo.
Ciyaaryahankan 35 jirka ah, oo heshiiskiisu ku eg yahay xili ciyaareedkan dhamaadkiisa, ayaanay jirin wax wada hadal ah oo u socda isaga iyo kooxda , waxaana indhawaydba lagu xidhiidhinayay inuu kooxo kale uga wareegayo, khaas ahaana waxaa si weyn loogu tirinayay kooxda Maraykanka ah ee LA Galaxy.
Laakiin, tababaraha kumeel gaadhka ah ee kooxda Ryan Giggs ayaa 24 saacadood markii uu xilka hayay, soo jeediyey in hal sanno oo dheeraad ah heshiiska loo kordhiyo Ferdinand, waxaanu sheegay oo kale xiisaha uu u qabo in difaacyahankan uu ku sii hayo naadiga.
In kastoo uu rajo fiican qabo , laftiisuna aad u danaynayo , wuxuu tilmaamay inuu ka dhur sugayo sida xaalku noqdo iyo in sida Giggs soo jeediyey sanad mudo kordhin ah loo sameeyo.
“Kolay waan sugayaa, ciyaaraha dhiman inaan sii ciyaaro ee dhamaadka xili ciyaareedka , kadibna waxaan eegi doonaa siday hawluhu noqdaan,” ayuu Ferdinand u sheegay warfidiyaha BT Sport oo waraysi khaas ah la yeeshay.
“Waxaan eegi doonaa in tababare cusub yimaado , ama Giggs sii joogo, cidii doonta ha qabsatee, waan ka dhursugayaa oo eegayaa.
“Waan caafimaad qabaa, Aad baan u fiicanahay, Waxaan dareemayaa fayo qab. Waxaan ku raaxaysanayaa ciyaarista kubada cagta, sidaas darteed hal sanno oo kale waan ku sii jirayaa, waxaanan ku rajo weynahay sanad, laba ama saddex iyo wixii ka badanba inaan sii ciyaaro. Laakiin horta waxaan u tijaabin doonaa si sanad sanad ah.
Van Gaal: Anaa Soo Saaray Xavi & Iniesta